Ike isi awọ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
A na-ekwukarị banyere ya ike isi awọ iji gosipụta mmetụta ahụ gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ihe, abụghị naanị ihe mejupụtara ya. N'ezie, ike awọ «Ike dị n’ime ya»Na Bekee, ọ na-egosi ike nke anaghị ahụ anya, ma etinyekwara ya na nke ahụ ihe onwunwe.
La ike isi awọ Ya mere o kwekọrọ na oke nke ike di nkpa iji meputa oru oma ma obu a ihe onwunwe, ma gosipụta ya n'ọtụtụ ọkwa:
Na n'ichepụta nke ngwaahịa ma obu ihe;
n'oge nke mmịpụta nke akụrụngwa;
n'oge nke njem nke akụrụngwa ndị a;
na mgbanwe nke ihe omuma ụmụ nwanne nne na imepụta ngwaahịa ikpeazụ;
n'oge nke ahịa site na ọrụ;
n'iji ngwaahịa ma ọ bụ na ya itinye n'ọrụ;
n'oge nke imeghari.
Ike ọchịchịrị nke a ihe onwunwe, akụrụngwa ma ọ bụ ọrụ, mejupụtara ike isi awọ abụọ na usoro niile nke oge ndụ ma ọ bụ mgbe ya. Ike na-adịghị agbanwe agbanwe, nke ahụ bụ, a ike Hazie (onyinye nke ume dị mkpa n'ichepụta na usoro ndozi n'oge ndụ) nke enweghị ike imeghari, na ike isi awọ emere maka mmeghari ohuru, nke ahụ bụ, a ike esiri ike imeghari ohuru.
Ozi ndị ọzọ - Ohia izizi nke uwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Gịnị bụ isi awọ